Hoggantoonni Daldalaa Briteen Gamtaa Awuroopaatti Hidhata Cimsuu Feena Jedhan
Waxabajjii 12, 2017
Hogganoonni daldala kan Briteen biyyattiin gamtaa Awuroopaa keessaa ba’u irratti gaaffii qaban jabeessaa jiru. Kunis torban darbe filannoo gaggeeffameen paartiin biyyatti bulchaa jiru kan Teresaa Meey paarlaamaa keessaa sagalee yayyabaa argachuu eega dadhabee booda.
Mootummaan Briteen gamtaa Awuroopaa waliin isa duraan karoorfame ture caalaa hariiroo walitti dhiyeenya qabu akka qabaaatu fedhu.Gabaa Awuroopaa michuu keenya cimaa waan ta’eef jecha itti gargaaramuuf carraa qabaachuu qabna jedhu.
Filannoo mufannaa hordoofsisee kan kamiisa darbee Sanaa as abdiin dinagdeen biyyatti akka hamaatti kufe.Abbootiin qabeenyaas mootummaa haaraa ijaaruu fi gamtaa Awuroopaa keessaa ba’u kan ilaaleen abdii raafamaa qabu.
Haallii siyaasaa ititaan yeroo ammaa dhabamuun dhibbaa inni hogganoota daldalaa irratti qabaatu hin beekamiin jira.
Dura ta’aan Paartii Arreenaa Haleellaatu Irratti Raawwatame: Paartii Arreenaa
Pirezdaantiin Faransaay Haaraan Paarlaamaaf Dorgomaa Jiran
Hiriirtoonni Moskoo Keessatti Hidhaman
Hariiroon Yoo Citee Hundumatu Miidhama: Qataar